Mba - TPNW - March ụwa
Mba - TPAN
Mbido » Mba - TPAN
Nkwekọrịta banyere Ngbochi Ngwá Agha Nuclear
The 7 July 2017, mgbe a afọ iri nke na-arụ ọrụ site ICAN na mmekọ, ihe karịrị n'ọnụ ọgụgụ nke ụwa mba nakweere a ịrịba ama zuru ụwa ọnụ nkwekọrịta iji machibido ngwá agha nuklia, na eze maara dị ka ndị Treaty na ukpan nke Nuclear Ngwá Agha . Ọ ga-abanye n'ike iwu mgbe mba 50 bịanyere aka na ya ma kwado ya.
Ọnọdụ dị ugbu a bụ na e nwere mmadụ iri asatọ na isii bịanyere aka n'akwụkwọ na mmadụ iri isii na isii bụkwa ndị kwadoro. N'etiti abalị na Jenụwarị 86, 66, TPAN malitere.
Ederede zuru ezu nke nkwekọrịta ahụ
State nke mbinye aka / ratification
Tupu nkwekorita, ngwá agha nuklia bụ nanị ngwá agha ọgwụrụ na-adịghị isiokwu na-a ngụkọta mmachibido iwu (ma ọ bụrụ na ha na-chemical na bacteriological ngwá agha), n'agbanyeghị na ha kpata ajọ akwalite ọdịmma ndị mmadụ na gburugburu ebe obibi na-esi nke ogologo oge. Nkwekọrịta ọhụrụ ahụ mejupụtara nnukwu ọdịiche na iwu mba ụwa.
Ọ na-egbochi mba dị iche iche site na mmepe, nyocha, ịmepụta, ịmepụta, ịnyefe, inweta, ịchekwa, iji ma ọ bụ iyi egwu iji ngwá agha nuklia, ma ọ bụ ikwe ka ngwá agha nuklia guzo n'ókèala ha. Ọ na-egbochi ha inyere aka, agbamume ma ọ bụ na-adọta onye ọ bụla iji kere òkè na nke ọ bụla n'ime ọrụ ndị a.
Mba nke nwere ngwá agha nuklia nwere ike itinye aka na nkwekọrịta ahụ, ma ọ bụrụhaala na ọ kwadoro ibibi ha dịka atụmatụ nke iwu na nke oge. N'otu aka ahụ, mba nke na-ebu ngwá agha nuklia nke mba ọzọ n'ókèala ya nwere ike isonyere, ọ bụrụhaala na ọ na-anakwere iwepụ ha n'ime oge ụfọdụ.
Mba dị iche iche ga-enyere ndị niile a na-eji aka na ule nke ngwá agha nuklia nyere ndị enyemaka aka ma mee ihe maka mgbatị nke gburugburu ebe obibi. Ihe odide a na-amata mmebi ahụhụ n'ihi ngwá agha nuklia, gụnyere mmetụta na-ezighi ezi na ụmụ nwanyị na ụmụ agbọghọ, na ụmụ amaala dị iche iche n'ụwa nile.
A kwadoro nkwekọrịta ahụ n'isi ụlọ ọrụ United Nations na New York na March, June na July nke 2017, tinyere òkè nke karịa mba 135, yana ndị òtù obodo. E mepere 20 September 2017 maka mbinye aka. Ọ na-adịgide adịgide, ọ ga-agbachitere mba ndị na-esonyere ya.
Ijikọta TPAN ịbanye n'ike bụ otu n'ime ihe kachasị mkpa nke World March maka Peace na Nonviolence.
Akwụkwọ nke mbinye aka ma ọ bụ ratification